Iingcebiso kwiNtengiso yezoLuntu kwiNkcazo yeeNgcaciso
Ngaba ufuna ukuphucula amacebo akho okuthengisa amajelo asekuhlaleni? Kukho iingcebiso ezininzi kunye neengcinga ukwenza ukuba kwenzeke, kodwa iingcebiso ezilungileyo zentlalo yoluntu ezivela ku-Max Bell, Semalt ingcali, zixutyushwa ngezantsi.
Sebenzisa i-Twitter ukukhulisa abaphulaphuli bakho
Kufuneka ugcine ingqalelo kwi-Facebook kunye ne-Twitter ukwakha abaphulaphuli bakho. Ukuba uzimisele ngokukwakha abaphulaphuli bakho, kufuneka uqaphele ukubandakanya umxholo kwaye wabelane ngawo kwi-intanethi yonke imini. Uya kufuneka ubhale amanqaku aphambili, yenze imifanekiso enemifanekiso kunye nemifanekiso ukusabalalisa kwi-intanethi. Oku kuya kubandakanyeka inani elikhulu labantu, kodwa akukho zicutshulwa ezimfutshane, ngoko kufuneka ubonise umonde wokufumana iziphumo ezifunwayo. Sebenzisa i-Twitter uze ufumane abasebenzisi abafanelekileyo ukuba balandele. Yabelana ngee-tweets kunye neefoto kwiphrofayili yakho, ubandakanye abantu abanee-movie, iividiyo, ii-audios kunye nezinye izinto ezifanayo.
Hlaziya i-Content Past to Improve Posts
Iingcali zithi abantu abashishini kufuneka bahlalutye umxholo wamva ngokuphucula umgangatho kunye nokujonga kwendawo yazo. Kufuneka uhlawule ingqalelo ekushicileleni umgangatho wekhwalithi, kwaye akufuneki kubekho ukunganyaniseki kuloo nto..Sebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zokuhlalutya nokuvavanya ukusebenza komxholo odlulileyo, kwaye uphucule umbala jikelele weefayile zentlalo yoluntu. Okokuqala, kufuneka ufake igama eliphambili kwiibhokisi zokukhangela ezenzakazo zoluntu ukuze ubone ukuba uluphi uhlobo lomxholo olwenza abantu abaninzi nangaphezulu. Kuza kukunika ingcamango yento abantu abathanda ngayo kunye nendlela yokuphucula icandelo lakho elizayo ngokubandakanya amanye amagama asemgangathweni kakuhle.
Ukuphuculwa koQhagamshelwano lweZibonelelo kunye neziXhobo
Umxholo obonwayo uthetha ukwabelana ngevidiyo kunye nemifanekiso kwinani elikhulu xa kuziwa ekucwangciseni okuqukethwe okubonakalayo, kufuneka ucinge ngolu hlobo lomxholo abaphulaphuli bakho bathanda kakhulu. Kubalulekile ukwabelana kuphela ngababalandeli bakho nabalandeli bathanda ukuhlola. Akufanele nanini uhlanganyele ngevidiyo okanye izividiyo ezindala ukuqhuba i-traffic kwiwebhusayithi yakho njengoko inokulimaza igama lakho jikelele kwi-intanethi.
Tshintshela ii-Formats Formats
Akufanele ube naluphi na ukuchasana nokuzama ngeentlobo ezahlukeneyo zomxholo. Umzekelo, unokwabelana ngamavidiyo amaninzi kwi-YouTube kunye nemifanekiso eninzi kwi-Facebook nakwi-Instagram. Kufuneka uhlale uqinisekisa ukuba iiplani zakho zentlalo zentlalo zifumene izinto ezahlukeneyo kunye neefomathi zemixholo ukuze ukwazi ukwandisa ukubonakala kwakho kwi-intanethi.
Ukunikezela ngokuQinisekayo ngokufanelekileyo
Akukho ndlela emfutshane yokuqhuba umsebenzi we-intanethi okanye ishishini, kwaye kufuneka usebenze nzima. Into ebalulekileyo kukuba kufuneka uhambise umxholo rhoqo ukwandisa ukubandakanyeka kuzo zonke iiprofayili zeendaba zoluntu. Oku kuya kukufumana amaninzi amanqweno, izabelo, kunye namazwana, ngaloo ndlela kukunceda ukuba ufumane ubomi ukusuka kwintuthuzelo yasekhaya lakho. Unokuqhuba ezininzi iindlela zokuhamba kwiphepha lewebhu ngokuhambisa umxholo phantse. Ngaphandle kwezinto eziphezulu, abantu babeza kuba neentlungu kwaye babeya kushiya indawo okanye kumaphephandaba ezentlalo. Ndiqinisekile ukuba awufuni ukuvumela ukuba kwenzeke, ngoko kufuneka uwanikeze umxholo womgangatho kunoma yimuphi umhlobo.